Incorporation uye LLC Fform Mibvunzo
Zvinotora nguva yakareba sei kupinza?
Ndeipi inokurumidza nzira yekuisa?
Ndingaite sei kuti ndikurumidze iyo nguva yekuisa?
Chii chinoitika mushure mekunge ndaisa odha yangu yekubatanidzwa?
Ini ndinogona kusanganisa pasina gweta?
Ini ndinoda iyo EIN Nhamba yekuisa?
Ini ndinoda rezinesi rebhizinesi kana ini ndakabatanidzwa?
Nyika yangu ine chero chakakosha zvinodiwa kuisa?
Ko kana zita rekambani yangu ratoverengerwa?
Ini ndinofanira kuburitsa stock mushure mekusanganisa?
Chii chinouya nepakeji yangu yekubatanidza?
Ndeapi magwaro akaiswa kuti apinze?
Pane chero magwaro e IRS aunofanirwa kuisa kana uchibatanidza?
Ini ndinogona kuisa mune imwe nhanho?
Ndezvipi zvimwe zvandinofanira kuyeuka kana ndichiisa?
Chimiro chemubatanidzwa uye chinosanganisira, ndinogona kuchichinja?
Ndeapi madhiri kana akasanganisirwa?
Kana ikabatanidzwa, ini ndichiri kuda DBA?
Ndingawanepi rumwe ruzivo?
Chii chandinoda kuvhura akaundi kubhengi mushure mekunge ndaisa?
Ndeapi marudzi emakambani?
Kambani inobhadharwa sei?
Chii chinonzi "mutero wakapetwa" kumakambani?
Ndeapi madhiri emakambani?
Ini ndinoburitsa sei yemubatanidzwa Stock?
Kambani yangu inogona kuva nemasheya mangani?
Chii chinonzi "Par Kukosha" uye stock stock?
Ini ndinofanira kuita misangano yemakambani?
Ndeapi masangano emakambani?
Ko mubatanidzwa wangu unowana sei EIN nhamba?
Ko makambani anotarisirwa sei?
Vangani mahofisi angave nekambani yangu angave?
Ndivanaani vari bhodhi bhodhi revatungamiriri?
Ndezvipi zvakakanganisika zvemakambani?
Ndezvipi zvinyorwa zvekubatanidzwa?
Chii chinonzi S Corporation?
Ndiani angave muridzi uye anomhanyisa mubatanidzwa?
Zvinodhura zvakadii kumhanyisa mubatanidzwa?
Ndeapi emakambani emhizha?
Zvinotora nguva yakareba sei kuisa?
Paunoraira sevhisi yekubatanidza nesu, isu tinogadzirisa odha yako nezuva rimwe chete. Dhipatimendi redu rebasa revatengi rinoongorora ruzivo rwako rwese uye rinobata iwe kana paine shanduko dzakakodzera kana zvinhu zvinoda kugadziriswa. Kana ichinge yapfuura kuongororwa, inoenda mubazi redu repamutemo kunogadzirira gwaro. Unogona kusarudza kutenga Speed ​​Faira, chero zuva rimwe chete, kana awa makumi maviri nemana yakavimbiswa kugadzirisa odha yako. Zvinyorwa zvako zvinozo nyorwa nekutumirwa kune akakodzera Secretary of State hofisi yebazi mukati menguva yawaka sarudza. Kazhinji iyi nguva nguva ndeye mazuva matatu ebhizinesi. Kamwe magwaro ako paanenge aine hofisi yenyika, inyaya yenguva yako yekugadzirisa nguva. Nedunhu, unogona kusarudza yakajairwa kana yekukurumidza faira. Kumbira mumiriri wako nezve iyo inofungidzirwa nyika kufaira nguva (izvi zvichachinja). Iwo magwaro anozo nyorwa pamwe nehofisi yenyika uye kutumirwa kudzoka kuCompanies Incorporate. Panguva ino yako odha inogadziriswa nedhipatimendi rekutakura uye chero zvigadzirwa kana masevhisi akaverengerwa, senge kuodha makiti ako emakambani uye zvisimbiso, IRS gadziriro yekunyora uye maakaundi ebhangi. Iwe unozogashira yako yakazara yekubatanidza package kuburikidza neakakosha tsamba kana husiku, zvichienderana nemasevhisi awasarudza.
Order yekugadzirisa nguva + Nyika yekugadzirisa nguva + Kutumira nguva yekugadzirisa (1 zuva)
Dzokera ku FAQ Chinyorwa
Paunosanganisa neMakambani Akabatanidzwa iwe unogona kusarudza Speed ​​Faira odha yako pamwe chete nezuva rimwe chete kugadzira, kana 24 awa. Izvi zvinoreva kuti magwaro ako anovimbiswa kugadzirirwa uye kutumirwa kune yakakodzera mamiriro hofisi yekunyora mukati menguva iyoyo nguva. Kuvandudzwa kunotanga pamadhora zana nemakumi mashanu uye kunowanikwa kuburikidza nedhipatimendi rebasa revatengi. Paunosarudza yedu yakazara pasuru (yakakurudzirwa) isu tichavandudza ako ekutumira sarudzo kuti uise pekutanga husiku kuhurumende uye kwauri. Yako mamiriro kufaira kunogona kukwidziridzwa kuti ikurumidze kukuchengetedza iwe nguva neyakagadziriswa mamiriro. Paunenge waiswa uye wagashirwa, zvinyorwa zvako zvinogadzirirwa uye zvinotumirwa zvakananga kwauri usiku humwe. Kazhinji, hofisi yenyika ichadya yakawanda yenguva yekugadzirisa nguva. Nekuderedza iyo nguva yekugadzirira, kutumira uye kurongeka kugadzirisa neCompanies Incorporate, unogona kuchengetedza kusvika kumazuva gumi ebhizinesi. Iyo inokurumidza nzira yekuisa ndeye Yakazara yekubatanidza package ine Speed ​​Faira upgrade.
Kune nzira dzakawanda dzekuchengetedza nguva neako yekubatanidza odha. Kweusiku kuendesa sevhisi kuhofisi yehurumende uye kwauri inzira inokurumidza yekuderedza nguva yekufambisa yemagwaro ako. Kuburitsa odha yako nehofisi yenyika kuchaderedza nguva yekufirita yenyika. Kutenga a Speed ​​Faira kukwidziridzwa kunovimbisa kuti odha yako inogadziriswa uye inotumirwa kuhofisi yehurumende mukati menguva yawakasarudza, ringave zuva rimwe chete kana maawa makumi maviri nemana, zvakavimbiswa. Yedu yakazara package inosanganisira kutumirwa kwekutanga uye nekukurumidza mamiriro kufaira.
Paunosanganisa neMakambani Akabatanidzwa, tinogamuchira odha yako kungave kuburikidza nepamhepo kana kuburikidza nedhipatimendi rebasa revatengi. Rwako rwese ruzivo rwunotsigirwa kunyatso uye kukwana uye ichaenda kubazi redu repamutemo. Kutanga zita rawasarudza kuisa rinotariswa kuwanikwa nehofisi yenyika yako. Kana isingawanikwe isu
Ehe. Makambani Anopindirwa ibasa repamutemo rekugadzirira gwaro rinonyanya kuisa mukubatanidza nekuumba masangano emabhizimusi matsva, kunyanya, Masangano, Makambani Akatemerwa Zvikwereti uye Kudyidzana Kusinganirana, pakati pevamwe.
Kwete. Iwe haudi EIN nhamba usati waisa. Mune zvimwe zviitiko iwe unogona kushandisa iripo EIN nhamba kana iri yebhizimusi rimwe chete uye yakawanikwa isati yaiswa. Makambani Akabatanidzwa anogona kugadzirira yako EIN kunyorera, kana kukuwanira yako EIN nhamba yako. Iwe uchazoda iyo EIN nhamba yekuvhura iyo bank account kune rako rakabatanidzwa bhizinesi.
Pamwe. Iwe unofanirwa kutarisa nedunhu rako uye / kana guta kune zvirevo zvemuno pamabhizinesi. Mamwe mabhizinesi mhando uye hurumende dzemunharaunda dzinoda rezinesi rebhizinesi kana mamwe zvitupa kana mvumo yekushandisa rako rakabatanidzwa bhizinesi.
Pamwe. Dzimwe nyika dzinoda kuburitswa, zvinoreva kuti chiziviso chipfupi mupepanhau chinoda kushambadza kuiswa kwebhizinesi rako. Makambani Akabatanidzwa anobata izvi uye chero zvakakosha zvinodiwa mudunhu rako kune vese vatengi vayo.
Paunoraira sevhisi yekubatanidza, iwe unozosarudza zita rebazi uye chitupa. Chinongedzo chinotevera zita rako uye kazhinji, "Corp", "Corporation", "Inc.", "LLC", "limited Liability Company", nezvimwewo. Kana chero nguva zita rako rekutanga zita uye chiziviso chisipo, isu tinoshandisa yako yekutanga imwe sarudzo uye enderera kusvikira zita rave kuwanikwa nedunhu rako. Dhipatimendi redu rebasa revatengi richakusheedza kuti usimbise chero shanduko kune yako yekubatanidza odha isati yaitwa.
Kuburitsa stock ndeyechimiro nemakambani. Kuti uwane kunyatsoenderana neese anoshanda maitiro, kuburitsa stock inzira inodiwa. Kune nzira dzakawanda dzekuburitsa stock uye inogona kupihwa kune vanhu vamwe, mamwe masangano nemakambani. Iwe unofanirwa kutarisa neyako wezvemari kuronga kana wezvemitemo chipangamazano pamhando dzestoko dzinogona kupihwa, huwandu hwezvikamu zvakagamuchirwa uye kukosha kwazvo uye kuti zvingakanganisa sei mamiriro ako emutero. Makambani Anosanganisirwa anosanganisira zvitupa zvemasheya ane akazara mapakeji nezvose zvaro zvekuisirwa odha.
Heino tafura inoratidza izvo pasuru imwe neimwe inosanganisira:
Bhenefiti Inosanganisirwa Mune Yako Package
Zadza Package Yekutanga Pasuru Kutanga Pasuru
Zita kutsvaga / kuchengetedza.
Kugadzirira uye kusefa zvinyorwa zvekuumbwa
Kunyoreswa mumiririri sevhisi.
Yakakosha kambani yekutarisa
Yakazara Corporate Kit
Rapid Filing Service - Zvinyorwa zvinotumirwa
husiku kana ruoko rwakaendeswa kuhurumende
FedEx kuendesa kamwe chete kwauri
S-Corp Sarudzo Fomu (2553)
EIN Mutero ID kunyorera (SS4)
Kurongwa Kwemutero (8832)
Vaka Yako Yemari Nhare (ebook)
Mutengo (hausanganisi Mari dzeHurumende) $380 $280 $99
Kuti ubatanidze fomu rakareruka ringave riri bhizinesi bhizinesi riri kunyorwa mukati medunhu uko ruzhinji rwebhizinesi rinoitwa. Mune ino kesi, izvo chete Zvinyorwa zveI Incorporation (Corporations) kana Zvinyorwa zveFform (LLC kana LP) zvinomirirwa uye zvakanyorwa nehofisi yenyika yako ndizvo zvinodiwa kuisa. Mune zvimwe zviitiko nyika yekubatanidzwa haisi iko kunoitwa ruzhinji rwebhizinesi, uko zvinyorwa zvinomisikidzwa nenyika yekubatanidzwa uye chinzvimbo chekune dzimwe nyika chinomirirwa nenyika (s) uko bhizinesi riri kuitiswa. Kuti uwane faira yekune dzimwe nyika, makopi akasimbiswa ezvinyorwa zvekutanga uye chitupa chekumira kwakanaka chinodiwa kuti upedze maitiro.
Pane chero magwaro e IRS aunofanira kuisa kana uchibatanidza?
Kwete. IRS haidi chero mapepa ekuisa. Kana iwe ukasarudza chinzvimbo chakasiyana chemutero, senge "Sub Chitsauko S Sarudzo" saka yako IRS fomu 2553 inoda kuiswa mukati menguva yenguva yemabhizimusi matsva neiyo IRS. Iyi shanduko yemamiriro emitero inofanirwa kuitiswa neako wezvemari kuronga kana accountant. Makambani Akabatanidzwa anosanganisira mafomu emitero akazadzikiswa ako ane akazara ekubatanidza mapakeji uye iwe unogona kusarudza kuisa iwo uye nekuchinja chinzvimbo chako chemutero ne IRS
Ehe. Kubva panzvimbo yemutengi, kana iwe uchinge waodha neCompanies Incorporate, iwe unozogashira zvigadziriso zvemamiriro pane odha yako nhanho dzese dzenzira uye rako rese gwaro pasuru rinosvika mukuendesa kumwe. Kune akawanda magwaro ekugadzirira uye vamiririri kuti vataure navo, Makambani Akabatanidzwa anobata zvese izvi kwauri, saka vatengi vedu vanowanikwa mune imwe nhanho inokurumidza uye yakapusa.
Paunoisa yako yekubatanidza odha, zvine hungwaru kurega accountant yako kana wezvemari kuronga yako ruzivo rwechisarudzo chako kuitira kuti chero shanduko yekuronga mutero igadziriswe pakubata kwebhizinesi rako nyowani. Izvo zvakare zvakakosha kuti uzive uye unzwisise mamiriro ako ekushandira mamiriro pamwe neyako bhodhi mhando. Nyika dzese dzinoda, nemutemo, kuti makambani anoita misangano yevanogovana, zvirinani, pagore. Maminitsi emisangano iyi anofanirwa kuchengetwa, kwete kumisikidzwa, asi akarekodwa uye achiwanikwa kana iwe uchiada. Gore rega rega, uchafanirwa kufaira chirevo cheruzivo, kana mushumo wepagore nehofisi yako yenyika uchiona chero shanduko kuchinyorwa rekodhi, kero, maofficial, madhairekitori, mumiririri akanyoreswa, nezvimwewo Kuchengeta kero pane rekodhi yeruzhinji (yakasarudzwa yakanyoreswa mumiriri ) inodawo kuti ugare wakamira zvakanaka nehofisi yako yenyika. Kubhadhara mutero wakakodzera nenguva ndechimwe chinhu chakakosha kufunga uye chinofanira kutarisirwa neako accountant kuti urege kupihwa chero zvirango nebhizinesi rako nyowani.
Ehe. Iwe unogona kugara uchiita shanduko kune rako rakabatanidzwa bhizinesi. Mune zvimwe zviitiko, inyaya yemagwaro epamutemo, kana chibvumirano chekushanda chinoshanduka (LLC), uye zvimwe zviito zvinoda kuiswa kweChinyorwa Chekugadziriswa nehofisi yako yenyika, sekushandurwa kwezita rekambani, kuwedzera kana kubvisa vatungamiriri nevatungamiriri. , Kuchinja zvikamu zvakagamuchirwa kana kukosha kwepfuma yako (Makambani). Makambani Akabatanidzwa anogona kufaira zvinyorwa zvako chero chikonzero mukati me1 bhizinesi zuva.
Mitemo yemitemo yakakosha nekuti inotsanangura mashandiro anoita kambani. Inorondedzera kodzero uye kugoverwa kwesimba pakati pevakuru kana mamaneja. Mitemo haina kuiswa nehurumende hofisi uye inogona nyore kana kuomarara sezvaunoigadzira. Mhando dzesangano dzinosiyana nemitemo uye LLC uye LP vanoshandisa zvibvumirano zvekushanda, izvo zvakafanana. Unogona kuita kuti kambani yako ive nyore kumhanya nekutarisira pamwe nekuziva, kuti ichafambiswa sei uye kuitiswa kuburikidza nemitemo. Igore ripi remari, misangano inoitwa sei, mangani madhairekitori uye hunhu hwavo, maitirwo emitemo yenyu anovandudzwa uye sei ekuchengetedza mabhuku ehukama akakodzera.
Pamwe. Kana izvi zvikatanga kutamba ndipo paunogamuchira mari, yechikamu chikuru. DBA (kuita bhizinesi as) inzira yekuziva yako bhizinesi kuburikidza nezita rakanyorwa, kunyangwe zita rako rakabatanidzwa rakasiyana. Semuenzaniso kana zita rako rakabatanidzwa riri California Computer Kugadzirisa, Inc. uye urikuita bhizimusi se www.WeFixYourPC.com, ipapo iwe uchazoda DBA kuisa mari inogamuchirwa yakabhadharwa www.WeFixYourPC.com. Chaizvoizvo une mazita maviri akanyorwa ebhizinesi. Unogona DBA mubatanidzwa kana LLC sezvaungaita iwe wega.
Makambani akabatanidzwa anopa ruzivo rwemahara paInternet yekubatanidza. Unogona kutarisa masevhisi edu uye ruzivo rwakananga ruzivo pano:
Ruzivo rweSangano LLC Ruzivo Incorporation Services
Kuti uzarure bhizinesi rebhangi account, iwe uchazoda yako yakamisikidzwa uye yakanyorwa Zvinyorwa zveInorporation uye yako yakapihwa Federal Employer Chitupa Nhamba kubva ku IRS. Kunyangwe chero chekutanga dhipoziti huwandu.
AC Corporation, ingangozivikanwa seyakajairwa bhizinesi mubatanidzwa ine akati wandei akasiyana. Vakamira kure neaya maInprofit Corporations anowira pasi pemitemo yakatwasuka uye mutero. Kusvika pane zvakajairika kumakambani emhindu, kune "C", "S" uye Professional Corporation. Nekutadza "mubatanidzwa" isangano "C", inonzi C mubatanidzwa nekuti inobvisirwa mutero pasi pechikamu C che IRS kodhi. C Masangano anogona kuve nehuwandu husingaverengeki hwevashandi vanogona kuve ese mafomati emasangano epamutemo. Iyo S Corporation yakagadzirirwa mabhizinesi madiki ekudzivirira mutero wakapetwa kaviri uye inowira pasi pekodhi ye IRS, chitsauko "S" uye ine zviyero pahuwandu hwevanogovana uye haigone kuve chero chinhu kunze kwemunhu. Nyanzvi dzemakambani dzakakosha C Masangano anongo ganhurirwa kune zvinangwa zvehunyanzvi sevachiremba, vanachiremba vemazino uye magweta. Aya marudzi emakambani anoumbwa pasi pemitemo yenyika iyo inoraira kuti ndedzipi mhando dzehunyanzvi dzinofanira kuisa rudzi urwu rwezvinhu zviri pamutemo.
AC Corporation inobvisirwa mutero zvakasiyana pasi peakasarudzika emakambani mitengo pamitero yese, mushure mekubviswa, uchishandisa iyo IRS fomu 1120. Dzimwe nzira dzebhizimusi dzinobvumidza purofiti uye / kana kurasikirwa kwechimiro chebhizinesi kuti chipfuure kune varidzi vanounza mutero mutero pa yavo yemitero kushuma. Iyo C Corporation inzvimbo inobhadharwa.
Mushure mekunge C Corporation yabhadhara mutero, chero ipi zvayo mushure memubhadharo wemutero inogona kugoverwa kune vagovana nenzira yezvikamu, kana kusiiwa mubhizinesi kuitira ramangwana rekudyara. Izvi zvinogona kukonzera mutero wakapetwa kune varidzi vebhizinesi, apo mubhadharo unobhadhara mutero pane purofiti yebhizinesi uye chero ipi mari yasara inobhadharwa kune avo vanogovera vanobhadhara mutero pamubhadharo wekudzoserwa. IRS Code sub chitsauko S inogadzirisa nyaya iyi kumakambani madiki uye inobvumidza kuti mubatanidzwa ubatiswe mutero semubatanidzwa kana "kupfuura" mubatanidzwa wemutero. S Corporations ane zvimwe zvakawanda zvinogumira pane vanogona kuve uye vangani vagovani varipo.
Mitemo inotonga mubatanidzwa. Iri igwaro remukati rinotsanangura mashandiro esangano. Mafomu ese anosanganisirwa, kunyangwe mashandurirwo emitemo, kana kugadziridzwa. Izvi zvicharatidza masimba, kodzero uye kugoverwa kwevatori vechikamu, kubva kune vagovana, vatungamiriri nevakuru. Mitemo yemubatanidzwa haina kumisikidzwa kune chero nyika kana hofisi yemubatanidzwa.
Dzimwe nyika dzine miganho yekuti mangani masheya angave nekambani uye vamwe vane mvumo yemitero yefranchise zvinoenderana nehuwandu hwezvikamu uye kana kukosha kwechikamu chimwe nechimwe. Iwe unofanirwa kubvunza neyako wezvemitemo kana wezvemari chipangamazano mudunhu rako kuti usarudze kuti mangani zvikamu izvo mubatanidzwa wako unofanirwa kuve nazvo. Seyambiro yakajairwa, kumakambani madiki ane mumwe kana vashoma chete vevanogovana uko pasina chinangwa chekuwana mari yekudyara, chikamu chidiki chemasheya chakabvumirwa chinokurudzirwa nemutengo wakaderera, senge zvikamu gumi neshanu paUS $ 1500. Iyi mari yakaderera zvakakwana kuti isamanikidze chero yakawedzera franchise mutero.
Par kukosha chikamu icho chikamu chega chega chekambani stock chakakosha, kana kukosha kwayo. Nyika yega yega yakasiyana neyakaenzana nepar kukosha parameter. Dzimwe nyika dzinotendera zvidimbu zvezana muzana muhuwandu, zvichireva kuti zvikamu zvako zvinogona kukosheswa pa $ .001, nepo vamwe vasingakwanise. Dzimwe nyika dzinoverengera mutero wefranchise nezvikamu uye mutengo wepasirese. Iwe unofanirwa kuita sarudzo iyi neyemutemo kana wezvemari nyanzvi uyo anoshanda mudunhu rawakaumba mubatanidzwa wako. Kazhinji mari shoma yemugove uye mudiki par kukosha inozokonzeresa mutero iwoyo wefranchise, kana zvichibvira.
Ehe. Nemutemo wenyika, makambani ese anofanirwa kuve nemusangano wevanogovana pane, zvirinani, gore rega. Iyi misangano inofanirwa kurekodwa nenzira yemaminetsi emusangano uye sarudzo dzese dzinofanirwa kunyorwa kuburikidza nesarudzo dzemakambani uye kuchengetwa mubhuku rekodhi rekambani.
Hofisi yemakambani yakakosha kuitira kuti mubatanidzwa wako upe zvakanyanya mukuchengetedzwa kwemutoro. Chikonzero chekutanga chekuumba mubatanidzwa kupatsanura hupenyu hwako hwepamoyo nehwebhizinesi. Mukudaro, iyo mubatanidzwa inofanirwa kuumbwa nemazvo, kuvhiyiwa uye kutarisirwa kuti iwedzere kuchengetedzwa. Kune akati wandei e "do's uye dont's" uko izvi zvinosvika mukutamba. Muenzaniso kubatanidza mari yemunhu neyebhizinesi. Kana izvi zvikaitika, kana mubatanidzwa ukakwikwidzwa nedare, zvinogona kuwanikwa kuti mashandiro ebhizinesi aifambiswa zvakanyanya nezviitiko zvemunhu zvekuti nhovo yekambani inogona kuregererwa. Aya marudzi etsika anosanganisira mutero, chivakwa uye mashandisiro ayo, kuzivisa uye manejimendi. Mamwe marudzi emashandiro ekushandira anosanganisira iwo anotemerwa nenyika nehurumende mutemo. Ndidzo:
Corporate Rekodhi Kuchengeta: Nemutemo, nyika dzese makumi mashanu dzinoda kuti vagovani vekambani vaite musangano kanenge pagore, uye mumwe panguva yesangano, kana kuumbwa kwesangano. Pamisangano iyi, maminetsi anofanirwa kutorwa nekuchengetwa mune yemubatanidzwa maminetsi bhainda, kana rekodhi rekodhi bhuku. Mumisangano iyi, zvinhu zvebhizinesi zvinokurukurwa uye sarudzo dzinoitwa uye bhodhi rinobvumidza matanho anoitwa nevakuru vekambani vanomhanya zuva nezuva zviitiko zvebhizinesi. Aya maitiro anowanzo kufuratirwa uye anopinda mukutamba kana chifukidziro chemubatanidzwa chikadenhwa. Kuchengeta maminetsi emisangano akakodzera, kunyora zvisarudzo zvakaitwa uye kubvumidzwa nebhodhi revatungamiriri hunhu hunodiwa chete kumakambani.
Registered Agent: Yese inosanganisirwa bhizinesi bhizinesi inoda kuve nekero ye server maitiro pane yeruzhinji rekodhi. Iri harigone kuve bhokisi rePO, rinofanirwa kuve kero yepanyama mukati medunhu mubatanidzwa wakavakirwa kana kuitisa bhizinesi uye ndeyekunze anokwanisa. Muzviitiko zvakawanda, varidzi vemabhizimusi madiki havadi kero yavo yekumba pane zvinyorwa zveveruzhinji, saka ivo vanosarudza munhu akasarudzika akanyoreswa mumiririri ane kero inowanikwa paruzhinji rekodhi uye inogutsa chimiro ichi.
Chirevo cheGore Negore cheRuzivo: Sangano rega rega rakamisikidzwa kana bhizinesi rakabatanidzwa rinofanirwa kufaira gwaro reruzivo, kana mushumo wegore. Izvi zvinotaurira hofisi yenyika chero shanduko mune ruzivo rwakakosha rwebhizinesi, senge makero, shanduko yemachinda, madhairekita uye vagovani, etc. Izvi zvinowanzobatanidza mari yezita uye zvinogona kuitwa zvemagetsi pamawebhusaiti mazhinji ehurumende.
Kubhadhara Mitero: Ehe, yega yega mubatanidzwa inofanirwa kuzivisa uye kubhadhara mutero kune vese federal uye franchise hurumende nenguva uye zvinoenderana nemitero yakatarwa yakamisikidzwa
Kuti uzarure bhizinesi rebhangi account, uye EIN nhamba inodikanwa. Kuti uwane yako nhamba kubva ku IRS, fomu rinofanirwa kuzadzikiswa, kusainwa uye kutumirwa mukati. Paunopedzisa fomu, kana iri bhizinesi idzva, maitiro acho akananga. Kana iwe uchitova nenhamba yeEIN usati waisa, saka pane zvimwe zvekuwedzera ruzivo zvinodiwa. Unogona kutidaidza uye tinogona kukunyorera iwe kana uchida. Makambani Akabatanidzwa anogona kugadzirira fomu rako reEIN kana kukuwanira yako EIN nhamba. Izvo zviri nyore!
Makambani ane hurongwa hwesangano. Varidzi vesangano, kana vagovani, vanosarudza bhodhi revatungamiriri kuti vatarise manejimendi manejimendi. Zuva nezuva zviitiko zvekambani ibasa revatariri vemakambani, avo vanosarudzwa nedare revatungamiriri.
Muzhinji mubatanidzwa une mana ekutanga mahofisi emahofisi, aya ndeaya: Mutungamiri, Mutevedzeri weMutungamiri, Treasurer uye Secretary. Chero zvazviri, chimiro chemakambani chinogona kutambirwa kusanganisira akawanda marudzi evatariri vemakambani.
Dare revatungamiriri iboka rakaungana, rakasarudzwa nevanozogovana mubatanidzwa. Dare revatungamiriri rinotarisira manejimendi uye marongero ekambani, zvichireva kuti vanosarudza vakuru uye vanobvumira zvisarudzo zvinoitwa navo. Iko hakuna kudikanwa kune bhodhi revatungamiriri kana hushoma huwandu, izvi zvinowanzo kuve hukuru hwekambani chimiro.
Paunosanganisa pane akati wandei mashandiro anoita izvo zvinofanirwa kuitwa. Bhizinesi rinodikanwa kuti riite zviitwa nemitemo yenyika nehurumende. Izvi zvinosanganisira mapepa, kuburitsa uye mazita ekushandisa mari mukati megore rose. Iko kusakosha kwekutanga ndiko kuita kwakabatanidzwa, zvisinei izvi zvinopfuura nekuchengetedzwa kwechikwereti uye zvakanakira, kazhinji.
Zvinyorwa zveInorporation ndiwo chaiwo magwaro ayo akaiswa uye akanyorwa nemunyori wehofisi yebazi rehurumende. Ichi chi "chitupa chekuzvarwa" chekambani yako uye igwaro repamutemo.
AS Corporation mubatanidzwa unowira pasi peyakasiyana IRS mutero kupatsanura, kunyanya chikamu chitsauko S sarudzo uchishandisa IRS fomu 2553. Izvi zvinobvumidza mubatanidzwa kubhadhariswa mutero sekudyidzana, "kupfuura nepasi" mutero sangano uko purofiti uye kurasikirwa kwakanyorwa pa ivo vagovani mutero wega wega unodzoka.
Chero ani mugari wemuUS ane makore anopfuura gumi nemasere anogona kusanganisira. Kune dzimwe nzira dzevasiri vagari vemuUS kuti vaise zvinoenderana nenyika nerudzi rwekambani.
Muzhinji iwo ekutanga mashandiro emitambo anogona kusanganisira mari ndeyekuchengetedza yakanyoreswa mumiririri hofisi - Makambani Akabatanidzwa anopa MAHARA akanyoreswa mumiriri mumiririri mumatunhu ese makumi mashanu egore rekutanga nezvose zvakabatanidzwa. Zvinyorwa zvegore negore zvemashoko akaiswa nehurumende yako zvinodhura madhora gumi nemashanu kusvika ku $ 50, zvichienderana nehurumende yako uye inogona kuiswa mumagetsi. Kuchengeta rekodhi rekodhi bhuku kana maminetsi emusangano wepagore zvinogona kuitwa nemunyori wesangano pasina muripo.
Sanganisa Ruzivo LLC Ruzivo Incorporation Services
Nyanzvi dzemakambani dzinoiswa seyakajairwa C makambani uye dzinogona kusarudza kusarudza S mamiriro chinzvimbo. Musiyano wekutanga imhando yebhizimusi uye nebasa rehunyanzvi rinokwanisa, kana kuti rinofanirwa kuve bhizinesi rehunyanzvi. Kazhinji, vanachiremba, vanachiremba vemazino uye magweta vanozoumba makambani ehunyanzvi.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa munaKurume 25, 2018